Inona no Tokony ho Fantatrao Momba an'i Louis Farrakhan: Biographie
Biographie momba ny firenena ao amin'ny Louis Farrakhan an'ny finoana silamo
Tsy nanamaivana ny heriny nandritra ny taona maro ny scandal
Ny minisitra Louis Farrakhan dia iray amin'ireo olo-malaza manohintohina indrindra any Etazonia. Na dia nitarika mpitarika marobe aza ny fanafintohinana, i Farrakhan dia nahavita nijanona ho hery manan-kery eo amin'ny politika amerikana, ny fifandraisana ary ny finoana . Amin'ity biographie ity, mianatra bebe kokoa momba ny fiainan'ny Nationan'ny mpitarika Islamika sy ny fomba naha-izy azy hatrany amin'ny Amerikana mihamitombo.
Tahaka ireo Amerikanina marobe maro be ireo, i Louis Farrakhan dia nihalehibe tao amin'ny fianakaviana mpifindra monina .
Teraka tamin'ny 11 May 1933 izy, tany Bronx, New York. Nifindra tany Etazonia izy mivady avy any Karaiba. Nivoaka avy ao amin'ny nosy Saint Kitts i Sarah Mae Manning reniny, ary avy any Jamaika i Percival Clark rainy. Tamin'ny taona 1996, nilaza i Farrakhan fa ny rainy, izay voalaza fa nanana lova Portiogey, dia mety ho Jiosy. Ny manam-pahaizana sy mpahay tantara Henry Louis Gates dia nanamarina fa azo antoka ny fitarainan'i Farrakhan, satria ny Iberiana any Jamaika dia manana tendro manana ny sephardic jiosy. Satria matetika no niampanga an'i Farrakhan ho anti-Semita ny fiarahamonin'ny Jiosy, ny fitarainany momba ny razamben-drainy dia mahagaga, raha marina.
Ny anarana teraka an'i Farrakhan, Louis Eugene Walcott, dia manambara ny disadisa eo amin'ny fifandraisan'ny ray aman-dreniny. Nilaza i Farrakhan fa nentin'ny raim-pianakaviana tao an-tsain'ny reniny iray antsoina hoe Louis Wolcott ny reniny, izay nananany zaza ary niova fo ho amin'ny finoana silamo izy. Nikasa ny hanomboka fiainana vaovao miaraka amin'i Wolcott izy, saingy vetivety dia nihaona tamin'i Clark, ka niteraka vohoka tsy nomanina.
Nanindry imbetsaka i Manning hanodina ilay bevohoka, araka ny voalazan'i Farrakhan, saingy tsy nahavita ny famaranana. Rehefa tonga ilay zaza, sady nanamaivana ny volony, dia nanamaina ny volon'izy ireo, i Wolcott dia nahafantatra fa tsy ny zanany lahy no lasa i Manning. Izany dia tsy nanakana azy tsy hametraka ny anaran'ilay zaza "Louis" taorian 'izy. Fa ny tena rain'i Farrakhan kosa dia tsy nandray anjara mavitrika tamin'ny fiainany, hoy izy.
Ny reniny dia nijanona ho fitaovana mafy orina. Mpihira mozika iray, nampiseho azy tamin'ny lokanga. Tsy noraisiny avy hatrany ilay fitaovana.
"Nanjary tia an'ilay fitaovana aho", hoy ny tsaroany, "ary nitondra ny adin-dry zareo aho satria mandehandeha any amin'ny efitra fandraisam-bahiny mba hampihatra izany satria misy feo tahaka ny ao amin'ny trano fandraisam-bahiny ary tsy afaka ny ' Tazo tao amin'ny efitra fandroana satria i Ludwig no tao amin'ny efitra fandroana. "
Nilaza izy fa tamin'ny faha-12 taonany, dia nilalao tsara izy tamin'ny fanatanterahana ny symphony civique Boston, ny orkesitra tao Boston College ary ny klioban'ny fialamboly. Ankoatra ny nilalao ny lokanga, nihira tsara i Farrakhan. Tamin'ny 1954, nampiasa ilay anarana hoe "The Charmer," izy, ka nanoratra ilay horonantsary "Back to Back, Belly to Belly", sarin'i "Jumbie Jamboree." Taona iray talohan'ny nanoratana dia nanambady an'i Khadijah vadiny i Farrakhan. Nanohy nanan-janaka sivy izy.
Ny Farrakhan izay mozika dia nahavita nampiasa ny talentany tamin'ny fanompoana ny Nation of Islam. Nandritra ny fanatanterahana izany dia nanatrika ny fivorian'ny tarika izy, izay natombok'i Elijah Muhammad tamin'ny taona 1930 tany Detroit. Amin'ny maha mpitarika azy dia nitady fanjakana iray ho an'ny Amerikana Afrikana i Muhammad ary nanamafy ny fanavakavaham-bolonkoditra. Ny mpitarika malaza NOI Malcolm X dia nandresy lahatra an'i Farrakhan mba hiaraka amin'ny vondrona.
Noho izany dia nataony, herintaona monja taorian 'ny nandraketana tokatrano tokatrano. Tany am-boalohany dia fantatra ho Louis X i Farrakhan, ary nanoratra ilay hira hoe "Lanitra iray fotsy ny helatra mainty" ho an'ny firenena.
Farany, i Muhammad dia nanome an'i Farrakhan ilay anarana izay malaza amin'izao tontolo izao amin'izao fotoana izao. Farrakhan dia nihanika haingana tamin'ny laharan-tarika. Nanampy an'i Malcolm X tao amin'ny moske Boston tao amin'ny vondrona izy ary nihevitra ny anjara toeran'ny lehibeny rehefa nandao an'i Boston hitory tany Harlem i Malcolm.
Tamin'ny taona 1964, ny fifanolanana misy an'i Muhammad dia nitarika an'i Malcolm X handao ny firenena. Taorian'ny fialany, Farrakhan dia tena naka ny toerany, nanamafy ny fifandraisany tamin'i Muhammad. Mifanohitra amin'izany kosa ny fifandraisan'i Farrakhan sy ny Malcolm X raha vao nitsikera ny vondrona sy ny mpitarika azy ireo.
Ny Malcolm X dia nilaza izao tontolo izao fa i Mohammad dia niteraka zanaka niaraka tamin'ireo sekretera zandriny.
Malcolm X nihevitra fa mpihatsaravelatsihy izy, satria tsy nitory momba ny firaisana ara-nofo ny NOI. Fa i Farrakhan kosa nihevitra an'i Malcolm X ho mpamadika amin'ny famoahana ity vaovao ity amin'ny vahoaka. Roa volana talohan'ny namonoana an'i Malcolm tao amin'ny kianja Audubon Harlem tamin'ny faha 21 Feb 1965 dia nilaza momba azy i Farrakhan, "lehilahy iray no mendrika ny ho faty."
Raha nisambotra mpikambana NOI telo ny polisy noho ny famonoana an'i Malcolm X, 39 taona, dia nanontany tena ny maro raha toa ka manana anjara andraikitra amin'ny famonoana i Farrakhan. Farrakhan dia nanaiky fa ny teny mahery vaika momba an'i Malcolm X angamba dia "nanampy tamin'ny famoronana ny rivotra" ho an'ny famonoana.
"Mety ho nitambesatra tamin'ny teny izay nitenenako hatramin'ny 21 febroary aho " Nanambara tamin'i Atallah Shabazz, zanakavavin'i Malcolm X, i Mike Andrade ary i "60 Minutes", i Mike Wallace tamin'ny 2000. "Miaiky aho ary manenina fa ny teny rehetra izay nilaza ny fahafatesan'ny olona iray. "
Ny Shabazz, enin-taona, dia nahita ilay fitifirana, niaraka tamin'ny iray tam-po aminy sy ny reniny. Nisaotra an'i Farrakhan izy noho ny fandraisany andraikitra sasantsasany saingy nilaza izy fa tsy namela azy.
"Tsy nekeny mihitsy izany mialoha izany ampahibemaso", hoy izy. "Mandra-pahatongan'izany, tsy niraharaha ny zanaky ny raiko mihitsy izy. Misaotra azy aho noho ny fanekeny ny maha-meloka azy ary maniry fiadanana izy. "
Ny vadin'ny Malcolm X, ny faran'ny Betty Shabazz , dia niampanga an'i Farrakhan tamin'ny fametrahana tanana tamin'ny famonoana. Toa nifanaraka taminy tamin'ny 1994 izy, raha niatrika fiampangana ny zanany vavy Qubilah, taty aoriana dia nilatsaka, noho ny filazalazana iray lazaina fa hamono azy.
Farrakhan manomboka ny orinasa NOI Splinter
11 taona taorian'ny nahafatesan'i Malcolm X dia maty i Elijah Muhammad.
Tamin'ny taona 1975 izany, ary ny hoavin'ny tarika dia tsy azo antoka. Nandao ny zanany lahy Warith Deen Mohammad i Muhammad. Ny tanora Muhammad dia naniry ny hamadika ny NOI ho toy ny vondrona Miozolomana iray antsoina hoe Mission Mission Muslim. (Malacolm X koa dia nanaiky ny finoana nentim-paharazana taorian'ny nandaozany ny NOI.) Nolavin'i Warith Deen Mohammad koa ny fampianaran'ny ray aman-dreniny. Saingy tsy niombon-kevitra tamin'ity fahitana ity i Farrakhan ary nandao ny vondrona mba hanomboka andian-dahatsoratra NOI mifanaraka amin'ny filozofian'i Elijah Muhammad. Nanomboka ny gazety Final Final koa izy mba hampahafantatra ny zavatra inoan'ny vondrona.
Farrakhan dia nandray anjara tamin'ny politika ihany koa. Hatreto dia nilaza tamin'ireo mpikambana ny NOI mba tsy hiditra amin'ny resaka politika, fa nanapa-kevitra i Farrakhan hanohana ny fanolorana an'i Jesse Jackson tamin'ny 1984 ho filoha. Samy miorina amin'ny Chicago's South Side ny vondrona NOI sy ny zon'ny sivily NOI, Operation PUSH. Ny voankazo avy amin'ny finoana silamo, ampahany amin'ny NOI, dia niaro an'i Jackson nandritra ny fampielezan-keviny.
"Mino aho fa ny kandidà Rev. Jackson dia nanaisotra ny tombo-kase mandrakizay amin'ny fisainan'ny mainty hoditra, indrindra fa ny tanora mainty", hoy i Farrakhan. "Tsy hieritreritra intsony ny zatovo fa ny zavatra rehetra azony dia ny mpihira sy mpandihy, mpihira sy mpilalao baolina kitra ary mpilalao baolina kitra. Saingy amin'ny alalan'ny Reverend Jackson no ahitantsika fa afaka ny ho mpitoriteny, mpahay siansa ary inona isika. Ho an'ity zavatra iray nataony irery ity dia tiany hifidy aho. ''
Jackson, anefa, tsy nahazo ny volany tamin'ny filoha tamin'ny 1984 na tamin'ny taona 1988. Nisalasala ny fanentanana voalohany izy raha niantso ny Jiosy ho "Hymies" sy New York ho "Hymietown", teny roa mifanohitra amin'ny Semitic, nandritra ny resadresaka nifanaovana tamin'ny mpanao gazety mainty Washington Post.
Fihetsiketsehana nitranga taorian'izay. Tamin'ny voalohany dia nolavin'i Jackson ny lahateny. Avy eo, nanova ny feony izy ary nanendrikendrika ny Jiosy hanandrana hametaka ny fampielezan-keviny. Niaiky izy taorian'izay, ary nanontany ny fiarahamonina jiosy mba hamela azy. Saingy nandà tsy hiaraka amin'ny Farrakhan izy.
Nanandrana ny hiaro ny namany i Farrakhan tamin'ny alàlan'ny fandehanana an-tserasera sy ny fandrahonana ny mpilaza vaovao, Milton Coleman, ary ny jiosy momba ny fitondrany an'i Jackson.
"Raha manimba an'io rahalahy [Jackson] io ianao dia ity no farany mampidi-doza anao," hoy izy.
Farrakhan dia nantsoina hoe Coleman ho mpamadika ary nilaza tamin'ny vondrona amerikana Afrikana handà azy. Ny mpitarika ny NOI koa dia niatrika fiampangàna ho fandrahonana ny fiainan'i Coleman.
"Ho avy tsy ho ela isika dia hanasazy anareo amin'ny fahafatesana," hoy i Farrakhan nanamarika. Taorian'izany, nandà ny handrahona an'i Coleman izy.
Farrakhan Mitarika Hetsika Nasionaly
Na dia niampanga ny antisemitisma nandritra ny fotoana ela aza i Farrakhan ary nitsikera antoko sivika mainty toy ny NAACP, dia azony nijanona ho manan-danja amin'ny fiovana Amerikana izy. Tamin'ny 16 Ôktôbra 1995, ohatra, izy dia nikarakara ny Marsa Miozolomana Lehibe tao amin'ny Foibe Nasionalin'ny Washington, DC, mpitarika ny zon'ny sivily, anisan'izany i Rosa Parks, Jackson sy Shabazz, nivory tamin'ny hetsika natao ho an'ny tanora Amerikana tanora Afrikana mba hisaintsaina ny pahaizana mahakasika ny fiarahamonina mainty. Araka ny tombatombana sasany dia manodidina ny antsasa-tapitrisa ny olona nanao ny diabe. Ny tombantombana hafa dia mitatitra vahoaka iray lehibe roa tapitrisa. Na ahoana na ahoana, dia tsy misy isalasalana fa olona an-jatony an'arivony no nivory ho amin'io fotoana io, zava-bita mahatalanjona ho an'ny mpikarakara rehetra.
Ny vohikalan'ny tranokalan'ny Islam dia nanipika fa ny diabe dia nanohitra ny fomba fijerin'ny Amerikana Afrikana.
"Tsy nahita mpangalatra, mpamono olona ary olom-boafidy araka ny mahazatra matetika tamin'ny alalan'ny mozika, sarimihetsika ary fampahalalam-baovao hafa; Tamin'io andro io dia nahita sarin'ity lehilahy mainty hoditra tany Amerika ity ny tontolo. Nahita lehilahy mainty manerana izao tontolo izao maneho ny fahavononany hiantsoroka ny andraikitry ny fanatsarana ny tenany sy ny fiarahamonina. Tsy nisy ady na fisamborana tamin'io andro io. Tsy nisy nifoka na nisotro. Ny Washington Mall, izay nanaovana ny Diabe, dia navela ho madio tahaka ny hita. "
Farrakhan tatỳ aoriana dia nanangana ny March March Family Million 2000. Ary 20 taona taorian'ny March March Million, dia nankalaza ny hetsika lehibe izy.
Taona maro tatỳ aoriana
Farrakhan dia nidera ny March March Million, saingy herintaona taty aoriana dia niteraka adihevitra indray. Tamin'ny 1996, nitsidika an'i Libya izy . Avy eo ny mpitondra Libiana, ny Muammar al-Qaddafi farany, dia nanao fanomezana ho an'ny Firenena Islama, fa ny governemanta federaly dia tsy namela an'i Farrakhan hanaiky ilay fanomezana. Na dia teo aza ny trangan-javatra toy izany sy ny lisitry ny fanamarihana an-tsokosoko, Farrakhan dia nahazo ny fanohanan'ny olona ao ivelan'ny vondrona mainty. Mankalaza ny NOI izy ireo amin'ny ady atao amin'ny tsy rariny eo amin'ny fiarahamonina, miaro ny fanabeazana sy ny herisetra amin'ny gang, ankoatra ny olana hafa.
Ny Apôstôly Michael L. Pfleger, pretra katolika fotsy manana paroasy ao amin'ny Chicago Side Side dia ohatra. Niantso an'i Farrakhan, mpanolotsaina akaiky azy indrindra izy.
"Namoy ny sakaizako aho ary very ny fanohanana-tsy noraharahavako ny toerana-noho ny fifandraisako tamin'i Farrakhan," hoy ny pretra tamin'ny New Yorker tamin'ny taona 2016. Nefa hoy izy nanampy, "Haka bala [izy sy ny hafa] amin'ny andro iray isan-kerinandro. "
Mandritra izany fotoana izany, Farrakhan dia manohy mamoaka dokam-barotra noho ny fanehoan-keviny. Fotoana fohy taorian'ny fanokanana an'i Donald Trump, dia niantso ny Etazonia izy "ilay firenena rotaka indrindra eto an-tany."
Tsy hoe fotsiny hoe gaga izy: vokatry ny ady 1812
Ny Toe-karena Amerikana tamin'ny Ady Lehibe I
Steve Brodie sy ny Bridge Bridge
Ny làlana nasionaly, Amerika Avaratra lehibe indrindra
Nahoana isika no manana faritra zarantsika?
Ny fifidianana tamin'ny taona 1824 dia voafidy tao amin'ny Antenimiera
Ny fiatombohan'ny baomba nipoaka tamin'ny 1886 dia nanohina ny fihetsiketsehana Amerikana
Ny Fiainan'ny Pocahontas indianina Powhatan
Ahoana no nahitan'ny Seminera maintana ny fahalalahana amin'ny fanandevozana tany Florida?
Ny Tantara Aorian'ny raharaha Cobell
Svetlana Shkolina: Manatontosa ny tanjany ambony
Ny horonantsary ady lehibe nokleary
Ny Andron'i St. Pat Quotes and Sayings
50 Ny fahasamihafana eo amin'ny kolejy sy ny sekoly ambaratonga faharoa
Fanamafisana ny fitovizana mitovy sy ohatra
Inona no mampatahotra ny amin'ny Bridgeny Man Bridge?
Ny Dinosaurs sy ny biby fahiny tany Iowa
Inona moa i Shirodhara?
Ny antony mahatonga ny mpilona an-dranomandry amorom-paty ho any an'ala: Triboluminescence
Inona no lazain'ny siansa momba ny fiaramanidina sy ny afo midedadeda?
Ahoana ny fametrahana "Dépêcher" (haingana)
The Majorest College Majors
Azonao atao ny mieritreritra ny Dada iray Longlegs dia Spider
Funny One Liners nataon'i Rodney Dangerfield
Fiovan'ny toetrandro: Ny porofo archeolojia
Lalàn'ny fiarovana ny Lamesa
Zava-dehibe avy amin'ny Diary nataon'i Anne Frank
Famaritana ny Viviparous